Tenga Mitambo: Yakanaka Bhodhi Mitambo uye Vhidhiyo Mitambo - Game Point - Bhodhi Mitambo uye Vhidhiyo Mitambo
Tenga mitambo: Yakanaka mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Mitambo yakanaka yebhodhi haiperi
Mitambo yakanaka yebhodhi inooneka nguva dzose, sezvinoita mitambo yemavhidhiyo isingafaniri kupotsa. Iwo mazita akagadzirirwa mapoka ezera akasiyana uye mhando dzemitambo. Nekuratidzika kusingagumi kwemitambo yakanaka painopihwa, zvakaoma kuti urambe uchitevera. Saka takaisa mazano mashoma ekuti zvive nyore kwauri kuti usarudze zita rakakodzera.
Chokutanga pane zvose, mitambo yakanaka yebhodhi haiperi. Iwo epamusoro eindastiri, munhu anogona kutaura nezve yakanakisa bhodhi mitambo, haifanirwe kuunzwa patafura kana yaonekwa. Mazuva ano izvi zvakaoma zvakadaro, nekuti dzimwe nguva yakanaka bhodhi nemakadhi mitambo inova isingawanzo yakanakira semhedzisiro yehype. Hazvina kujairika kuti ekutanga editions yemitambo yakakurumbira parlor itengeswe nekukurumidza. Kudhindazve kunogona kutora mwedzi yakawanda, kunyange nevaparidzi vakakura. Kurudziro yedu: Iva nemoyo murefu. Kana mutambo webhodhi zvechokwadi uri munzira yekuve yemazuva ano yekare, saka zita racho harizoshata neshanduro nyowani. Mukupesana: editions anotevera anowanzo kupa zvirinani zvemitambo zviitiko nekuti vatsikisi, vanyori uye vapepeti vanogona kuita ongororo dzakakosha kumitemo kana zvinhu. Sezvinoita nemitambo yemavhidhiyo, chinhu chimwe chete chiri kushanda kumitambo yebhodhi: mutambo unofanirwa kukura.
Mitambo yebhodhi: Maitiro akasiyana akakosha
Kana mutambo webhodhi ukava wakanaka, wakanaka kana kunyange mutungamiri wemhando zvinoenderana nezvinhu zvakati - zvinosanganisira chitarisiko, mafambiro emutambo, chiyero chekuomerwa, kukosha kwekudzokorora, kuoma, kuwanikwa uye marongero. Izvo pasina chimwe cheizvi zvinhu chinogona kutsiva, zvisinei: Kugadzira yako yekufarira. Izvi zvinoshandawo kumitambo yebhodhi: Haufanire hazvo kunakidzwa zvakanyanya nemazita chaiwo anorumbidzwa nevamwe.
Kuwana mitambo yebhodhi yakanaka zvinoreva zvakare: kuiedza, kuiedza, kuiedza. Nemutambo wega wega, vatambi vanoona zviri nyore kuumba kuravira kwavo mumutambo. Nhanho nhanho iwe unozogona kuona kuti ndeupi rudzi runokodzera iwe. Ini ndinoda abstract euro board mitambo zvakanyanya? Ini ndinonyanya kunakidzwa mune tactical madiki ehondo? Kana kuti mutambo wekadhi usina kudzika asi unovaraidza nemhuri wakandikwanira here? Iko hakuna chinhu chakadai seKURAvira kwakakodzera mumitambo, chete yemunhu.
Ndezvipi zvakanakira mitambo yebhodhi? Mitambo yebhodhi inounza akawanda akasiyana mavara akatenderedza tafura imwe kuti vafare pamwechete. Varaidzo inotanga. Mukuwedzera, kune maitiro echipiri anogona kuita kuti mutambo manheru anokosha: vana vanodzidziswa motokari, hutano uye unyanzvi hwepfungwa, vanodzidza kugadzirisa matambudziko kana kugadzirisa ruzivo rwakasiyana panguva imwe chete. Vakuru vanobatsirwawo nemitambo yebhodhi, semuenzaniso kudzidzisa ndangariro yavo kana kugadzira. Pamusoro pezvo, kune mamiriro ekukurukurirana emhando dzakasiyana-siyana: Matekiniki uye marongero anokurukurwa, nhaurirano pamusoro pemisoro yemitambo yebhodhi inogona kupa varaidzo kure nebhodhi remutambo.
Kusarudza yakanaka bhodhi mutambo kunogona zvakare kuenderana nebhajeti iripo. Ikozvino kune mitambo yebhodhi yakawanda muchikamu chepamusoro-soro. Kuunganidzwa, kunonzi Mabhokisi Makuru kana Ekupedzisira Editions, dzimwe nguva anotodhura zana remaeuro. Kazhinji mazita aya anonangana nevatambi vane ruzivo rwakanyanya kana mapoka ekutamba uye kwete kune vanotanga.
Vanotanga kunyanya vanogona kupinda munyika yemitambo yemuhoro kuburikidza nemitambo yemhando yepamusoro kana mitambo yemhuri inohwina mibairo, yakaita semazita echikamu cheMutambo Wegore, anosarudzwa nechikwata chezita rimwe chetero kamwe pagore. Azul, Kingdomino, Just One, Guta Rangu, Spicy uye vashandi vanonyanya kukosha kubva mumakore mashoma apfuura. Uye: Kunyangwe kana vatambi vanogara vachisimudza mhino dzavo nekufinyamisa kumeso, kune vanotangisa makirasi anowanzo kuve mavhurira egonhi chaiwo. Kuunganidzwa kwemitambo, Monopoly, Game yeHupenyu kana Njodzi inogara ichiguma pamatafura emitambo kumba. Uye ani nani akafarira nezvazvo, anokurumidza kutora danho rekuenda kune mamwe mazuvano mitambo yebhodhi.
Wepamusoro 50 mitambo yebhodhi
Tenga mitambo yebhodhi zvakachipa paInternet
Vatengi vazhinji vanoendawo nemutengo kana zvasvika pabhodhi nemitambo yemakadhi. Mitambo yebhodhi kazhinji yakachipa muzvitoro zvepamhepo. Dzimwe nzira dzave kubuda dzinoshanda senzvimbo dzekusangana:
Iyo hofori yekutengesa Amazon ine isingaverengeke mitambo yebhodhi, mitambo yemakadhi uye matoyi akagadzirira, dzimwe nguva kunyange kubva kunze kwenyika. Saka kana iwe uchitsvaga mitambo yebhodhi kubva kuUSA, unogona kuiwana paAmazon Germany. Zvisinei, zvakakosha kufunga kuti mari yekutumira yakanyatsokodzera kumutambo mumwe chete.
Mitambo yebhodhi inogonawo kuwanikwa zvakanyanya uye zvakanyanya paEbay. Kune vatengesi pamwe nevanhu vakazvimiririra vanotengesa mitambo yebhodhi nemakadhi mitsva, yakanaka senge mitsva kana kushandiswa. Iyo yepamhepo auction chikuva inogona kuve yakakodzera nzvimbo yekuonana, kunyanya yekutenga Kickstarter mapurojekiti akapera kare kare.
Mutengesi wemitambo ane zvitoro zvepa online
Vazhinji vatengesi vemitambo vemunharaunda vava kutevera maitiro epamhepo uye vanoshandisa yavo zvitoro zveinternet kwaunogona (pre) kuodha mitambo yebhodhi. Vamwe vatengesi vanovimba nemhando dzepakati uye vanongopa maodha uye kutora-up. Pano zvakakosha kuwana zvakawanda pawebhusaiti yemutengesi webhodhi wepanzvimbo.
Yakachena online mitambo mutengesi
munyengeri seMilan mitambo, iyo mitambo inogumbura kana yekufungidzira nyika yakanyatso kutengeserana online mumitambo yebhodhi. Mitambo yebhodhi nemakadhi inogona ku-odha ipapo nguva isati yasvika mazuva avo ekuburitswa. Mazita anobva kunze kwenyika anowanikwawo.
Mapeji ekuenzanisa anopa kukurumidza uye kwakajeka kutarisisa kwemitengo yazvino yemitambo inozivikanwa uye yakakurumbira yebhodhi. Kana iwe uchida kuchengetedza pakutenga mitambo yebhodhi uye uchida kutenga mitambo yebhodhi zvakachipa, unofanirwa kutarisa nzvimbo dzekufananidza mutengo usati wazvitenga, semuenzaniso. Brettspiel-angebote.de tarisa-tarisa.
Zvitoro zvisina hunyanzvi zvepamhepo
Nekuda kwekufarirwa kwemitambo yeparlor, mitambo yebhodhi, mitambo yemakadhi uye matoyi zvagara zviripo muzvitoro zvisiri zvehunyanzvi zvepamhepo. Vatengesi vemabhuku kunyanya vanobatanidzwa: Semuyenzaniso Thalia, Bücher.de kana Hugendubel. Mukana kune avo vanofarira: iyo online mapuratifomu anogara achipa discounts.
Kune asingaverengeki mapoka eFacebook umo mafeni haangokurukure mitambo chete, asiwo anopa mazita ekare ekutengesa. Mapoka emisika yemaflea kunyanya akakodzera kutenga mitambo yebhodhi, inosanganisira mazita emapoka akasiyana anotariswa. Asi chenjera: mitengo inopihwa yemitambo yebhodhi yakashandiswa haigari yakachipa. Kuenzanisa kunogona kuva kwakakosha, sezvinogonawo kutaurirana kwemutengo wekutenga.
Mutengesi wemitambo wemuno muGermany
Iwe haugone kungotenga mitambo yebhodhi paInternet, vatengesi vakawanda vemunharaunda vanowanzoshandura chido chekuita basa uye vanopa kwete chete kutenga zvipo, asiwo mazano uye, kwete kazhinji, sarudzo dzemitambo muzvitoro zvepa-site. Nekuti izvi zvinofanirwa kuchengetedzwa, munhu anofanirwa kuyera asati atenga kana kuchengetedza maeuro mashoma muchitoro chepamhepo zviri nani kuenda kumutengesi wemitambo wemuno. Kuitira kuti vatambi vatoziva kuti padhuze nekwavanogara kune ane nyanzvi yekutengesa mutambo, isu takanyora runyoro rwevatengesi vemitambo yeparlor vatinoziva.
Zvitoro zvemitambo zvemuno muGermany, zvakarongwa nematunhu ezip code
Vatengesi vezvitoro vanowanzoshoropodzwa nemitengo yakakwira yavanochaja yemitambo yakanaka yebhodhi. Chero ani anotenga mitambo chete pahwaro hwekufunga kwemitengo anobhadhara zvakanyanya paavhareji pamutengesi wepanzvimbo, asi pfungwa yebasa inogona kuratidza masimba ayo kunyanya muchikamu chekutamba. Hazvishamisi kuti vatengesi vavhure zvitoro zvavo nekuda kwechido, kureva vashandi vekutengesa uye varidzi vezvitoro vanoziva nyaya ye "parlor games".
Kurudziro saka kazhinji kekutanga-ruoko zvichibva pane chiitiko chaicho. Imwe mukana wevatengesi vepanzvimbo: Vashoma vanopa mikana yekutamba mitambo pasaiti, kuronga misangano yemitambo kana kupa bhodhi mutambo makwikwi kana zviitiko mukubatana nevaparidzi. Saka iwe unogona kusangana nevamwe vatambi kubva kwaunogara, chinjana mazano uye nenzira iyi uve chikamu chenharaunda yemitambo nharaunda, uko kurudziro inoitwa zvakare.
Maererano neStatista: Chikamu chemhuri muGermany dzinotamba mitambo yebhodhi kakawanda pavhiki
Maererano neStatista: Pezana yevaGerman vane classic "Mensch ärgere dich nicht"
Mitambo yebhodhi yakanaka: Ongororo uye bvunzo zvichakubatsira iwe kusarudza
Kana paine chinhu chimwe chinogona kuita kuti zvive nyore kune vangangove vatengi vebhodhi mutambo kusarudza kana kupokana nezita, iri, dzimwe nguva, wongororo yakawanda yemitambo yebhodhi. Miedzo yemitambo yebhodhi akadaidzwa. Kana zvasvika pakuratidzwa kupfupi kwemutambo, zvinowanzokwana kuverenga rondedzero imwe chete - kana kuona vhidhiyo inoenderana kubva kubhodhi game influencer.
Nekudaro, kana iwe uchinyatsoda kushandisa mari - uye iyo isiri diki mari nemimwe yemazuva ano mitambo yebhodhi - haufanirwe kuvimba nemaonero ega. Kunyangwe vatambi vazhinji vachidzokera kumashure pazviteshi zvinozivana uye izvo zvinoenderana nemaitiro avo ekutamba, hazvisati zvichirwadza kuwana akati wandei maonero kuitira kugadzira kupindirana.
Mukuwedzera, kune akawanda bhodhi mutambo bvunzo uye Ongororo yemitambo yebhodhikuti vanyori vanogara vachiisa zvakakosha zvakasiyana. Kune vamwe, optics yakakosha, vamwe vanotarisa kumakanika, uyezve vamwe vaongorori vanovaka mishumo yavo yemafungiro uye kusimba kwekudyidzana kwekutamba. Zvaunofarira zvemunhu zvinogara zvichiratidzwa muongororo kana bvunzo yemutambo webhodhi. Uye nekuti maonero uye kuravira kwakasiyana kwazvo, vanoongorora vanouyawo kune akasiyana ratings. Pazvakanakisa, vatambi vanoshandisa kwakasiyana mafomati uye akasiyana mafomati: Semuenzaniso, wongororo yakanyorwa yemitambo yebhodhi inogona kunyatsowedzerwa nemavhidhiyo emitemo kana "Ngatitambe" paYouTube.
Kunyange kana pasina mitemo yakasimbiswa yekuongorora kwebhodhi - somuenzaniso, kusiyana nekuongorora kwebhuku kana kuongorora kwemafirimu - zvinyorwa zvepfungwa zvinofanira kunge zvakasununguka, zvakajeka, asi pamusoro pezvose zvakatendeseka. Hazvishamisi kuti vaongorori vasina ruzivo kunyanya vapinde mumhando yedenderedzwa rakashata: Pakutanga, mufaro wekuita kuti mutambo uvepo wakakura zvekuti zviyero zvinogona kunge zvakakwirira kudarika kuravira kwemunhu zvingangokurudzira kana iwe wakatarisa pamutambo. ruzivo rwakadzama.
Icho chokwadi chekuti mawebhusaiti mazhinji ebhodhi mutambo anowanzo ane ongororo yakanaka haisi hazvo kushaikwa kwemhando. Kazhinji, vanoongorora, vanoblogi kana Youtubers vanoedza iyo mitambo yebhodhi yavanofungidzira pachine nguva kuti vanogona kunge vachivaraidza. Saizvozvo, nekuda kwehuchokwadi hwepamusoro mukusarudzwa kwemishumo yebvunzo nekuda kwechiitiko chekare, ongororo dzinowanzo batsira - asi kwete nguva dzose.
Ongororo yakadzama yemitambo yebhodhi